समीक्षा: मञ्जूषालाई नियाल्दा - Kendrabindu Nepal Online News
समीक्षा: मञ्जूषालाई नियाल्दा
२५ श्रावण २०७६, शनिबार १२:०२
मञ्जूषा कथाकार तथा आख्यानकार सबु सुवेदीको पहिलो उपन्यास हो । शिखा बुक्सले प्रकाशन गरेको यो उपन्यास युवाप्रेमको सशक्त प्रस्तुति हो ।
उपन्यास लेखनमा पहिलो प्रयास भएर पनि सुवेदीको लेखन निकै परिपक्व छ । उनको उपन्यासमा नयाँ लेखकमा देखिने कमजोरी सामान्यतः देखिएको छैन । सरल तर परिस्कृत, सहज तर मिठासपूर्ण, काल्पनिक तर यथार्थको पुटयुक्त उपन्यास मञ्जूषा परिकल्पना, भाषाशैली एवं प्रस्तुतिका दृष्टिले लोभलाग्दो छ । केन्द्रीयतामा प्रेम भए पनि उपन्यासले विविध सामाजिक विषयवस्तुमा समेत स्पर्श गरेको छ ।
उपन्यासको भाषा सरल छ । समाजको यथार्थ कथावस्तुसँग लेखकीय परिकल्पना मेल खाएको छ । वर्तमान समाज एवं माओवादी द्वन्द्वकालीन समाजको तारतम्ययुक्त स्वाभाविक चित्रण छ । युवा एवं किशोर उमेरजति प्रेम सम्बन्धका विविध पाटाहरूलाई केही स्वाभाविक अनि केही आदर्शको जलपका साथ केलाइएको छ ।
‘साँच्चिकै तपाईंले पाँच जनासँग प्रेम गर्नुभयो ?’ कथा यसरी सुरु हुन्छ । उपन्यासमा पूर्वदीप्ति शैली अँगालिएको छ । पत्रकार रुपेशलाई आफ्नो भोगाइ पस्कन्छिन् मञ्जूषा— ‘अंग्रेजी साहित्यमा मास्टर्स सकियो । लभमा पीएचडीको शोधपत्र गरेँ, त्यसको नतिजा यही जिन्दगी हो ।’
मञ्जूषा थाकेकी छिन् पाँचजनाको प्रेमबाट, अघाएकी छिन् जीवनबाट । भनेपछि कस्तो प्रेम ? उपन्यास लेखिकाका रूपमा प्रसिद्धि कमाइसकेकी मञ्जूषा चुरोटको सर्कोसँगै जीवन उडाइदिने आत्मपीडक व्यंग्य निचोर्छिन्– ‘प्रेमले मलाई स्ट्रङ र बेशर्म दुवै बनायो ।’
निम्नमध्यम परिवारकी मञ्जूषा जिल्लाकै सबैभन्दा राम्रो बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँछिन् । दुई वर्ष भइसकेको छ पढाउन थालेको । स्कुल टाढा छ, साइकल चढेर जान्छिन् । तेस्रो वर्ष कक्षा एकमा पढाउने क्रममा एकजना विद्यार्थी नित्यमसँग स्नेह गाँसिन्छ उनको । नित्यम सम्पन्न परिवारको बालक । नित्यमकै माध्यमले उनको भेट हुन्छ नित्यमको अंकल विनोदसँग । भर्खरै किशोर वय पार गरेकी मञ्जूषाप्रति कुराकानी सुरु भएदेखि नै लोभिएको छ विनोद । विनोद नित्यमलाई ट्युसन पढाउन राजी तुल्याउँछ मञ्जुषालाई । आर्थिक भरथेगका लागि सुरु गर्छिन् पढाउन । विनोदले अनेक तिकडम लगाउँछ, विवाह गर्ने वाचा गर्छ, आफ्नी बूढी आमामार्फत भावनात्मक दबाब दिएर आफूसँग प्रेम गर्न बाध्य तुल्याउँछ विनोद ।
‘समाने शोभते प्रीति’ भन्ने नीति छ चाणक्यको । यस्तो नीति पढेकी भए पनि, असमान सम्बन्ध टिक्न सक्दैन भन्ने कुरा बुझेकी भए पनि मञ्जुषा पग्लन्छे विनोदको तापमा । आशाको पंख लगाएर उड्छिन् सोझी मञ्जूषा । शारीरिक सुख लुट्छ पिपासु विनोद मञ्जूषाबाट । स्वार्थ पूरा भइसकेपछि परिपक्व नभइसकेकी मञ्जूषासँग टाढिन्छ विनोद । सपनाको सुन्दर संसार सजाएर बसेकी मञ्जूषामाथि सोच्नै नसकिने किसिमले अमानवीय घात गर्छ विनोद । स्कुलको जागिरसमेत छोड्नुपर्ने बनाउँछ, असीम कष्ट दिन्छ । मञ्जूषा सचेत हुँदाहुँदै पनि फस्छिन् विनोदको जालमा । बिना कुनै गल्ती सजाय भोग्छिन् मञ्जूषा ।
जनयुद्धकालीन समय छ । जताततै त्रास व्याप्त छ । मञ्जूषाको दोस्रो प्रेमी बनेर आइपुग्छ लडाकू सिद्धार्थ । सिद्धार्थलाई साँच्चिकै माया गर्छिन् मञ्जूषा, तर त्यो सुषुप्त छ । उनीहरूबीच बौद्धिक बहस हुन्छ । मञ्जूषाको तर्कमा दम देख्छ सिद्धार्थ । लडाकू जीवन छोडेर मञ्जूषासँग घरजम बसाउने चक्कर उसको पार्टीले थाहा पाउँछ । सिद्धार्थ मारिन्छ । भावनात्मक प्रेम फक्रन नपाउँदै निमोठिन्छ । मञ्जूषाको जीवनको दोस्रो प्रेमी, जो प्रेमका लागि पार्टीको गद्दारीको आरोप सहनसमेत तयार भयो । जमिन छेडेर नउम्रिँदै निमोठिएको बिरुवाझैं भयो दोस्रो प्रेम ।
तेस्रो प्रेमी छ गौरव । मञ्जूषाभन्दा कमजोर आर्थिक अवस्था भएको ड्राइभर गौरव मञ्जूषालाई बिहे नै नगरी आफ्नो बनाउँछ । आफ्नो हीन भावना प्रदर्शन गरेर भविष्यको सपनामा मञ्जूषाको सर्वस्व ग्रहण गर्छ । पैसा धुत्छ, आफ्नी बूढी आमाको सेवा गराउँछ अनि मञ्जूषाको भावनाको दोहन सबै गर्छ गौरव । अनि मञ्जूषाकै प्रेरणा वा करबलमा भविष्य राम्रो बनाउने सपना बोकेर विदेसिएको गौरव सम्पर्कविहीन हुन्छ ।
दुवईमै फिलिपिनो केटीसँग घरजम गरेर बसेको खबर आइपुग्छ, ऊ मञ्जूषाको प्रेमले तानिएर नेपाल नफर्कने पक्कापक्की हुन्छ । यता गौरवकै विश्वासमा परेर मञ्जूषाले अमेरिकाबाट आएको सम्पन्न केटाको विवाहको प्रस्ताव अस्वीकार गरेकी हुन्छिन् । के थाहा गौरवबाट धोका हुन्छ भनेर !
मञ्जूषाको चौथो प्रेमी बनेर फेसबुकमार्फत जोडिन आइपुग्छ राजु । कतारमा थियो राजु । राजुसँग च्याटमा कुरा गर्दागर्दै उनीहरूबीच प्रेम बस्छ । राजुको प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि चौथोपटक प्रेममा पर्छिन् मञ्जूषा । तीन महिनापछि राजु नेपाल फर्कन्छ । उनीहरू सँगै घुम्छन् पूर्वका सहर एवं पर्यटकीय स्थलहरू । यसबीचमा आएको बिहेको कुरा राजुकै कारण अस्वीकार गर्छिन् मञ्जूषा । तर एक दिन, राजुले गेस्टहाउसमा राखेर जबर्जस्ती यौनसम्बन्ध राख्न खोज्छ । मञ्जूषा उसको मुखमा थुकेर फर्कन्छिन् । उसले पनि वासना शान्त पार्न मात्रै प्रेमको नाटक गरेको रहेछ । झल्याँस्स हुन्छिन् उनी । आखिरमा राजुले मञ्जूषाकै साथी प्रतीक्षासँग बिहे गर्छ ।
यसरी चारचारवटा प्रेम असफल भइसकेकी २७ वर्षीया मञ्जूषा काठमाडौं आउँछिन् । संघर्ष सुरु हुन्छ काठमाडौंमा । फेरि एकपटक प्रेममा पर्छिन् मञ्जूषा । हिरो बन्न संघर्षरत निगम मञ्जूषाकै कमाइ खाएर बस्छ, शारीरिक सुख लिन्छ, केही दिँदैन तर अधिकार जताउँछ । निगमकै लागि ऋणमा भासिएकी छिन् मञ्जूषा । एक दिन त मञ्जूषाकै कोठामा हिरोइन डिम्पलसँग सुतिरहेको रंगेहात फेला पार्छिन् मञ्जूषा । त्यसपछि त यो प्रेम सम्बन्ध पनि टुट्छ ।
यहाँनेर पत्रकार रुपेश र मञ्जूषाको वार्ता सकिन्छ । कथाले अर्कै गति लिन्छ । अब मञ्जूषा जीवन बुझ्ने भइसकी छिन् । तर गन्तव्यको कुनै टुंगो छैन । एक्लो छ जीवन । मञ्जूषा लेखिकाका रूपमा ख्यातिप्राप्त छिन् । चलचित्रका कथा लेख्छिन् । पढाउँछिन् । यद्यपि अब उनीसँग पैसा छ, प्रसिद्धि छ, सबथोक छ । तर …..अधूरो, अपूरो, केही खाली खाली छ उनको जीवन ।
विद्यार्थीहरूसँग मञ्जूषाको आत्मीय सम्बन्ध छ । जयस, हरीश, शेखर, चन्दन आदि खुलेरै जिस्कन्छन् उनीसँग । एकदिन एउटा केटो विपन आउँछ उनको जीवनमा । अनिताको प्रेममा विछोड बेहोरेको विपन अगाध प्रेम गर्छ मञ्जूषालाई । उमेरको फरक छ, तर प्रेममा सबकुछ जायज छ । उनीहरूबीच शारीरिक सम्बन्ध पनि गाँसिन्छ । भावनात्मक सम्बन्ध अझ प्रगाढ छ । यसबीचमा केही समय मञ्जूषाको पाँचौं प्रेमी निगमले दुःख दिन खोज्छ । अन्तमा सबै सेटल हुन्छ, निगम ठेगान लाग्छ । कुरा अघि बढ्छ विपनसँगै तर कसरी ?
अन्तमा मञ्जूषा भन्छिन्— ‘मैले छैटौं प्रेम विपनसँग गरेकी थिएँ या थिइन । तर सबैभन्दा मीठो अनुभूति उसैसँग सम्हालेँ ।’ अनि त्यही रात, सँगै सुतेको विपनलाई एक्लै छाडेर गन्तव्यहीन बाटोमा लाग्छिन् मञ्जूषा । सिद्धार्थले यशोधरालाई जसरी छाडेर अलप भएका थिए मञ्जूषा त्यसरी नै गायब हुन्छिन्, कथा सकिन्छ ।
समाजका सूक्ष्म पक्षलाई कथामार्फत सरल, सहज र सरस भाषाशैलीमा उतार्नु सबल लेखकीय पक्ष हो । उपन्यासको कथा नौलो नभए पनि शैली नौलो छ, सरलताको मिठास घोलिएको छ भाषामा । परिवेश स्वाभाविक छन् । पात्रविन्यास सामान्य छ । मूल कुरो त उपन्यासले कहीँ कतै रोकिन दिँदैन पाठकलाई । सरसर्ती अघि बढिरहन बाधा छैन, सलल्ल बगिरहन पाइन्छ जीवनका आरोह अवरोहहरूको साधारणीकरण गर्दै । हल्काफुल्का दर्शनका टुक्राहरूसँग यत्रतत्र साक्षात्कार गर्न सकिन्छ । यस अर्थले उपन्यास सफल छ ।
यसो भन्दैमा उपन्यासमा कहीँ कतै कुनै त्रुटि नै छैन भन्न सकिने अवस्था छैन । वर्णविन्यासगत त्रुटिहरू छन् तर कम मात्रामा । कथा प्रेमकै हो, यसमा पनि के के न नौलो होला भनेर अपेक्षा नगर्नु नै वेश होला । एउटा औसत एवं भनिआएकै कथालाई स्वाभाविकताको जामा पहिराएर नयाँ तरिकाले प्रस्तुत गर्नसक्नु उपन्यासकारको खुबी देखिन्छ । पहिलो प्रयासमै यो खालको उत्कृष्टता हेर्दा नेपाली साहित्य क्षेत्रले उपन्यासकारसँग ठूलै आशा राख्नसक्छ ।
Prevबाघको छालासहित प्रहरी पक्राउ
जया ओझालाई ७ प्रश्नNext